Iswiidhan oo maalgelin cusub ku sameeynaysa Suuriya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Isabella Lövin wasiirka kaalmada caalamiga ee dalka Sweden Foto: Muna Ismaacil
Iswiidhan oo maalgelin cusub ku sameeynaysa Suuriya
"Lama shaqeeyno Al- assad"
La daabacay torsdag 17 december 2015 kl 10.20
Iswiidhan ayaa maalgelin cusub ku sameeynaysa kaalmada dhaqaale ay waddanka Suuriya siiso. 340 milyan oo koroon ayaa la siin doona suuriya shanta sanno ee fooda inugu soo haya. Lacagtan ayaa logu talo galay waxbarida dugsiga iyo daryeelka caafimaadka.
Go´aankan ayaa ka yimid dawladda waddanka hogaamisa.
Wasiirka kaalmada caalamiga ah ee Isabella Lövin ayaa sheegtay in ay Suuriya tahay waddan caawimaad badan u baahan.
-Wada hadaal nabadeed ayaa ka socda xaalada suuriya, waxaanan rajeeynaya in u dagaalkani dhamaado. Hadii aan waddanka lacag ka caawin karno si loo dhiso bulshadda, islmarkaas na shaqooyin laga abuuro, waxey ila tahay in aanu wada hadalka nabadeed horumar ka arki karno, ayey sheegtay Isabella Lövin.
Qeeyb ka mid ah lacagta ay Iswiidhan ku maalgelinayso Suuriya ayaa lugu talo galay waddamada jaarka ah ee lubnaan, jordan iyo turkiga oo qaxooti faro badan qaabishay.
In kasta oo ay Iswiidhan lacagtan siinayso suuriya weli waxaa adag sii lacagtan loo gaadhsin lahaa dadka u baahan, madama u dagaal sokeeya ka socdo waddanka. Halkey kooxda argagaxisada ah ee Daacesh iyo maamulka Al-assad dagaal halkaas ka wadaan.
-Anagu lama shaqeeynayno labadan koox. Marka aanu waddankan dhisayno, waxaan wada shaqeeyn la sameeynayna qaramada midoobey iyo EU. Weli tiro gaadhaysa 2 milyan oo caruur ayaan iskuul dhigan islamarkaas na ay boqolkii ba 60 dadka shaqo haysan.
Isabella Lövin ayaa sheegtay in ay tahay masuuliyadda heeeyada kaalmada caalamiga ah ee SIDA in ay lacagtan gaadhsiiso dadka u baahan.
Dhaqaalaha lugu maalgelinayo suuriya mawaaxaa u sabab ah qaxootiga faraha badan ee iswiidhan sharci ka codsaday?
-Ujeedadeenu maaha in aanu dadkan joojino, waxaanu doonayna in u waddanku nabad noqdo,ayey wasiirka kaalmada caalamiga ah ee Isabella Lövin hadalkeeda ku soo gabagabeeysay.
Laga bilaabo 1 bisha january sannadkan ayaa 340 milyan oo koroon loo qeybin doona shanta sanno ee soo socda si loo dhiso Suuriya.